politika fiarovana fiainan'olona | Free Sport TV
Tsy misy horonan-tsary, na horonan-tsary dia nampiantrano an-toerana. Izay mety ho ny lahatsary ianao dia afaka mahita eto dia azo nahazo maimaim-poana ao amin'ny tranokala toy ny Justin.tv, Ustream.tv, Selfcast, ary ny maro hafa. Mariho fa tsy mampanantena na miantoka ny asa fanompoana sy ny tsy tompon'andraikitra na inona na inona asa ny mpampiasa. Tsy manana fiaraha-miasa, ary tsy mangataka ny hanana fiaraha-miasa amin'ny rehetra ny tompon'ny lahatsary na ny renirano ny nomena eo amin'ny tranonkala. Afa-po rehetra dia zon'ny mpamorona ny tompony tsirairay.
1.1 Na dia nanao izay rehetra azo atao isika eo amin'ny fanomanana ny toerana, isika ny hampahafantatra anao fa azo ara-teknika ny mihazakazaka izany tsy misy fahadisoan'ny. Tsy misy fiantohana azo omena ny amin'ny fitohizan'ny asa ny vohikala ary tsy handray andraikitra isika raha toa izany dia tsy ho Functional noho ny fahadisoany na fikojakojana.
1.2 Tokony hahatsapa fa ny vaovao rehetra dia nomen'ny antoko fahatelo ary izahay lanja tanteraka ny asany. Na izany aza dia tsy mendrika ho an'ity vaovao.
1.3 Ny votoatiny eo amin'ny tranonkala mifanaraka amin'ny lalàna, fa isika Zavatra tsy handray na inona na inona madio tsy fanarahana ny lalàna eo an-toerana mifanaraka amin'ny les juridictions.
2. Links ny sy ny Website
2.1 Mety ho io vohikala rohy hypertext mihazakazaka ny toerana ny antoko fahatelo. Tokony mampahafantatra anareo fa tsy misy fanaraha-maso ny avy amin'ny tranonkala toy izany, ary tsy tompon'andraikitra ny fanazavana nomena azy ireo.
3. Fampiasana vaovao
3.1 Isika tsy tompon'ny misy fanazavana nomena momba ny tranonkala. Noho izany, dia tsy tompon'andraikitra amin'ny zavatra atao izany. Mety hizara vaovao tany am-boalohany, raha manana na inona na inona manohitra ny tompony.
Zarao amin'ny namana
Copyright © 2015 freesport-tv.com | Politika fiarovana fiainan'olona